Steroid yakasimba kwazvo Mibolerone (Tarisai madonhwe) online | AASraw
/Blog/garari/Steroid yakasimba kwazvo Mibolerone (Tarisai madonhwe) paIndaneti
Posted on 07 / 19 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora garari. Izvo zvine 0 Comment.
Zvose pamusoro peMibolerone (Tarisai madonhwe)
1.Chii Mibolerone (Tarisai madonhe)?
2.Mibolerone Kuwedzera Pharmacy
3.Mibolerone bodybuilding kushandisa
4.Mibolerone (Chedza Matoro) migumisiro
5. Mibolerone hafu yeupenyu
1. Chii chinonzi Mibolerone (Tarisai madonhe)?
Mibolerone(chengoro madonhesi, Nhamba Nhamba 3704-9-4) inonziwo dimethylnortestosterone (DMNT), yakatanga kugadzirwa mu 1963. Mibolerone yakatengeswa neUpjohn ane zita rechigumo Check Drops naMatenon, kuti vashandiswe sechirwere chechirwere chezvinyorwa.Itakaratidzwa zvakananga semuromo wekurohwa kwekudzivirirwa kweEstrus (kupisa) mumakumbo makuru echikadzi (mibolerone dog).
Mibolerone ibhaibheri rechiremba anabolic steroid iyo yakasunungurwa muZ1960 ne Upjohn pasi pezita rainzi Check Drops uye gare gare seChechedza Medicated Dog Food (mibolerone imbwa). Chinangwa che steroid iyi ndechekuvhiringidza kunonoka kwemwedzi yeja imbwa (mibolerone imbwa) kuitira kudzivirira kubata pamuviri. Sezvakaita vazhinji vanabolic steroid hormones, uye izvi zvinosanganisira gorosi rezviremba, hazvina nguva refu mushure mokutanga kwaro kuti vatambi uye varimi vemuviri vakawana kushandisa (mibolerone bodybuilding).
Mibolerone Chemicals Description
zita Mibolerone, DMNT
Zita rekushandisa Tarisa Matoro, Matenon, Tarisa Mhuka Yakagadzirwa Zvokudya
Storage Temp Firiji
ruvara Muchena kana Mucheka mutsvuku
Nezve mibolerone yekuvaka muviri, mibolerone (Tarisai madonhe) ndechimwe chetero steroid yakasimba yakamboitwa. Icho ndechimwe chezvinhu zvakanyanya kuoma steroid zvakamboitwa maererano nemigumisiro yemigumisiro. Iyi haisi steroid inowanzoshandiswa nevanice bodybuilders kana vatambi. Iwe unowanzowanzoshandisa kushandiswa kwaro kunongopedzisira kupikisana kana kuti powerlifting makwikwi. Vamwe vashandi vemuviri vauchishandisa iyo isati yakwikwidza kuti vabatsire mumavhiki ekupedzisira kana munguva yekunze-yekusundidzira kwekuwedzera, asi haisi iyo yakajairika yekuvaka muviri steroid. Tichaita zvakawanda pamusoro peiyi yakasimba zvikuru steroid mibolerone (Tarisai madonsi) rambai.
2. Mibolerone Kuwedzera Pharmacy
Where is Mibolerone from? Nzira yekuita sei Mibolerone (Chedza Matoro)?
Sezvambotaurwa kare, Mibolerone iine vet-grade anabolic yakatanga kusikwa mu1960s nekambani inonzi Upjohn. Munguva iyi nguva, yakanga ine zita rekutanga rainzi Check Drops, asi gare gare, yakashandurwa kuva chimwe chinhu chakasiyana: Tarisa Imbwa Inotengeswa Mbwa (mibolerone imbwa). Chikonzero chepakutanga iyi steroid yakagadzirwa ndeyokudzivirira imbwa dzevakadzi kuti dzirege kubata pamuviri. Yakashanda zvakananga kuti irege kumwedzi kwembwa dzechikadzi, uye yakanga iri uye inoramba iri chaiyo, chigadzirwa chakagadzirirwa nechinangwa chekubatsira canines. Zvisinei, sekune mishonga yakawanda ine chinangwa chimwe, vanhu, kunyanya avo vari munhandare yemitambo uye yekugadzira muviri, vakaiona ichibatsira kune zvimwe zvikonzero.
Nezvekuita mabolerone (Tarisai Dhepa), mibolerone inobatanidzwa kune imwe steroid yakakurumbira inonzi Nandrolone. Mibolerone is oral anabolic androgen, uye yakabva pane imwe steroid yakakurumbira, Nandrolone. Izvi chaizvoizvo zvakachinjwa kubva Nandrolone. Tarisa madonhwe anogadzirwa nekungowedzera rimwe rinonzi methyl boka ku 7th uye 17th nzvimbo yeNandrolone hormone. Iri boka rinowedzera pa 7th chiito rinoita kuti rive rakawanda zvakanyanya maererano nemigumisiro yaro uyerogenic, uye inodzivirira 5-alpha reductase enzyme kushanda. Iko boka rinowedzera kusvika ku17th nzvimbo inodzivirirawo hormone kuti irege kukuvara panguva yemuromo. Saka nenzira yepamusoro, inonzi inonzi C17-alpha alkylated anabolic steroid.
Nezvishoma izvi, zvinyorwa-bitty zvinoshanduka, zvinokonzera Nandrolone hormone yakasimba uye yakasimba nesimba. Icho chaiyo inogona kuva imwe ye-steroid ine simba zvikuru uyerorogens yakasikwa, zvakanyanya kudaro, kuti Upjohn chaizvoizvo anotaura kuti Check Drops inenge yakapetwa katanhatu nesimba kupfuura testosterone uye kanenge katatu seanonyanya kemukati uyerogenic. Kushanda, inoratidzika kunge ine simba zvikuru kune izvozvi zvakare.
3. Mibolerone bodybuilding kushandisa
Mibolerone inoshandiswa nevarimi vemweya, vapambi vemasimba, vatambi vane simba uye varwi, zvose nokuda kwekuwedzera kukuvadza uye kushanda pazuva rekukwikwidza. Mibolerone (Tarisai madonhwe) anoshanda kana achishandiswa mumiririri we 30 musati makwikwi. Mushandisi achaona kukura kwechisimba, kutarisa uye kukwikwidzana motokari. Kunyange zvazvo steroid iyi isingabatanidzi zvakananga, inoratidza chiito chinonyatsooneka pane CNS (Central Nervous System) kuburikidza nemhando ye androgen inowedzera. Ichi ndicho chikonzero chikonzero ichi chinodhaka chinoshandiswa nevatambi, sezvo maronda anowanikwa asingazivikanwi nemudhaka uyu.
Mibolerone is oral anabolic steroid, yakagadziriswa kubva nandrolone. Uyu mushandi anonyatsotsanangurwa 7,17-dimethylated nandrolone, zvakanyanya zvakanyanya seanabolic uye androgenic agadziri kupfuura mubereki wavo asina-methylated. Mumakore ose aya, mabolerone akawana mukurumbira pakati pevarimi vemuviri seve rimwe remasimba ane simba zvikuru akamboitwa. Izvi zvakarurama mupfungwa yemagetsi, sezvo iine imwe chete yechisarudzo shoma steroid michina inobudirira inoshanda mu microgram, kwete milligram, mari. Munguva yehutachiwana hwemhuka, mbolerone yakatsunga kuva ne41 nguva iyo vanabolic basa re methyltestosterone kana rakataurirwa nomuromo. Kusiyana neizvi, yakanga iine 18 nguva iyo ye androgenic. Kunyange zvazvo zvinhu zvose zviri zviviri zvakanyatsoratidzwa nemuranda, iyo inoramba iine anabolic character (mune imwe pfungwa). Estrogenic uye progestational properties zvinonyanya kuzivikanwa nechirwere ichi, zvisinei. Pakati pevatambi ndiyo inonyanya kushandiswa panguva dzekudzidzira zvikamu zvekudzidzira, kana kuti kukurudzira kushungurudza usati wadzidzira kana kupikisana.
Mibolerone haisi steroid inowanzoshandiswa nevanice bodybuilders kana vatambi.
4. Mibolerone (Tarisa Matoro) zvinokonzera
Pasina mubvunzo, zvikonzero zvakakosha kuti Mibolerone (Tarisa Manyopa) chirwere chinonyanya kuzivikanwa chinokonzerwa nemigumisiro yaro yakakura uyerogenic, mune mamwe mazwi, kukwanisa kwayo kusimbisa uye kusimbisa kusagadzikana. Ichi ndicho chikonzero chisarudzo chakakurumbira chevarwi, varwi vanorwa, uye vatambi vane simba, zvakare. Kune avo vanoshandiswa pakukwirira kwepikwikwi, zvakajeka zvazvinogona kuita maererano nemigumisiro yaro; izvi zvinoita kuti zvinyatsobatsira uye zvinobatsira. Kusiyana nekutenda kwakakurumbira, vazhinji vanabolic steroid havawedzeri hutsinye. Ichokwadi, vanogona kuwedzera kuisa pfungwa uye kuwedzera hutano hwe testosterone hunoita kuti pave nechinangwa chekutarisa uye chinokurudzira, asi kusvika pakupikisa, kushatirwa kwehasha, vashoma mishonga ine mhedziso iyo Miberlorone ine. Kukakavara hakusi chinhu chakaipa, kana. Kana iwe uri muchengeti wemusoro, munhu ane mutoro, iwe unogona kushandisa zvakanyanya utsinye kana uchishandiswa zvakakodzera. Zvisinei, kana mumwe munhu ane mafungire akaipa, zvingava chisarudzo chisina kuchenjera kuvapa kana kuvabvumira kushandisa Mibolerone (Chengeta Matoro).
Chinonyanya kukosha chero munhu angashandisa rudzi urwu rwemishonga, zvakare, kuitira chinangwa chekusimudzira kufungisisa kwekufunga uye kushungurudzwa kunotungamirira mukurwisana kana zvimwe zvimwe zvishomanana zvakashata, zvinoda-to-get-psyched-up rudzi rwemakwikwi. Ndivo vanowanzoti vatambi vatore mishonga inotungamirira kukurwisa kuti vawedzere kurwisana mune zvekurovedza, asi vashandi vemuviri vauchishandisa iyo pamugumo wemakwikwi ezvokudya zvinotangira kupedza mavhiki mashomanana kubva pakuona kwepfungwa. In mukusimbisa muviri, prep inonyanya kuoma, uye mumavhiki ekupedzisira apo nguva dzinowanzova dzakaoma, pane nguva dzose kudiwa kwekupedzisira kushandiswa kwepfungwa, uye Mibolerone (Tarisai Drops) inokwanisa kuzviitira ivo. Zvinofanira kuonekwa kuti kuchengetedza kushandiswa kwaro kunogona kutungamirira kune zvimwe zvinonaka, zvisinei, kuitira kuti mvura ichengetedzeke. Izvozvo zvakati, chinhu chimwe chinogona kudzorwa uye hachisi chikuru chechibvumirano pakuenzanisa kune zvimwe zviitiko zvinoita kuti prep ive yakaoma.
Mukufungidzira, Mibolerone (Tarisa Matsipa) chirwere chinenge chiine zvimwe zvakanakisisa vanabolic, asi nekuda kwekukuvadza kwakadini kwehutano hwako, zvinokonzera zvachose kusanzwisisa kushandisa madhiragi izvi zvikuru chinangwa ichocho. Izvozvo zvakati, mumwe munhu ari nani zviri nani kubva kungozvitora nokuda kwechisimba, uyezve, icho ndicho chaiicho chikonzero chekutora icho chakapiwa kuti chinokuvadza sei mune dzimwe nzira dzakawanda.
Mibolerone (Tarisa Matsipa) ane hafu yehupenyu hwemaawa e4 (mibolerone hafu yeupenyu), iyo iri pfupi (nguva inotevera iyo mishonga nemigumisiro yayo inobva mumuviri wemushandisi). Ichi ndicho chikonzero vatambi vanorayirwa kuti vashandise iyo maminitsi e20 kusvika kumaminitsi e30 vasati vasvika panguva yavanoda kuwedzera.
Hapana humwe humwe uchapupu huripo hune hutano kana kuti hunoti vatambi vari kushandisa Kutarisa matonho mu "marangi" (mibolerone cycle) sezvinojairika nedzimwe steroid. Zvinoratidzika kuti steroid iyi yakasimbisa zvakasimba kudai steroid isati yaitika yekusarudza kuwedzera kukuvadza uye kukwikwidzana motokari. Zvisinei, hapana pfuma yakawanda mumisasa yemasumbu inogona kuwanikwa pamushonga uyu nemhaka yekuti inogona kungoshandiswa munguva shomanana ye2 vhiki yepamusoro, mudiki madolerone doses. Pane imwe nguva nguva iyo, kana kuti chirwere chakanyanya kukura, uye zvinetso zveutano zviri pedyo.
Mibolerone inowanzoshandiswa pamusoro pemaminitsi e30 musati makwikwidzana, nokuti mishonga inoita shoma shomolerone hafu yeupenyu. Nzira yekutora mishonga iyi inonyanya kushandiswa, iyo iri kuisa tablet yeMibolerone pasi porurimi. Iyi nzira yekushandisa inobvumira kuwana kukurumidza kushungurudza uye simba kuwedzera. Chiito chechirwere ichi chinopera munenge maawa e4, zvino chinhu chinobviswa kubva mumuviri womunhu.
Chimwe chirwere chembolerone chinowanikwa ne 5 mgs yeMibolerone inofanira kutorwa maminitsi 30 isati yasvika nguva inokosha yekudzidzira kana kukwikwidzana. Kazhinji, ichi chinodhaka chinotorwa sega, kwete mibolerone cycle, pasina kuvhara nemamwe mishonga.
Kazhinji, kusiyana nemamwe akawanda anabolic madhiragi, Mibolerone (Tarisai madonhwe) haashandisi panguva yekufamba. Izvi zvinongova steroid isati yaitika iyo inoita kuti utsinye uye kukwikwidzana ngadzive nesimba. Nzira pfupi yehutungamiri uye yakaderera mibolerone dosages inoshandisa Mibolerone kumusana kuwana mashoma asina maturo. Kune rumwe rutivi, kutora nguva yakareba kana kune yakakwirira mabolerone dosages kunogona kukurudzira zvinetso zvehutano. Sezvo Mibolerone hafu yeupenyu hupfupi, mishonga inofanira kutorwa maminitsi 30 mushure mekukwikwidza.
Kana iwe uchida chaizvo kutora mushonga uyu, unogona kutenga mibolerone paIndaneti pawebsite yedu pa www.aasraw.com, asi usakanganwa kutora hepatoprotectors kuderedza Mibolerone inotyisa chiito.
8. Mibolerone madhara
Mibolerone migumisiro yakawanda. Iyi ndeimwe ye steroid ine simba zvikuru uye yakawanda anabolic steroid yakamboitwa. Nemhaka yokuti mibolerone migumisiro yakasimba iyi haisi steroid chero munhu anofanirwa kushandisa. Kune dzimwe nzira dzakasiyana-siyana dziri nani. Kuwedzera kwechisimba kunotaura musati mhirizhonga inogona kunge iri kuedza, asi njodzi inowanzopfuurira mubayiro pamwe nesteroid ino. Izvi hazvirevi kuti munhu wacho achafa, uye zvinokwanisika kuti madolerone emigumisiro yemigumisiro irege kudzivirirwa kusvika kune imwe (haikwanisi kudziviswa zvachose) .Mibolerone madhara anogona kusanganisira:
Mibolerone inogadziriswa nemuviri, uye inonzi iine estrogenic steroid yakawanda nemhaka yekutendeuka kwayo ku7,17-dimethylestradiol (an estrogen ine basa guru rezvinyorwa). Gynecomastia inogona kuva nehanya panguva yekurapa, kunyanya kana yakakwirira kudarika maitiro ekurapa maitiro anoshandiswa. Panguva imwe chete yekuchengetedza mvura kunogona kuva dambudziko, zvichikonzera kurasikirwa kunoshamisa kwemasumbu tsanangudzo semadzimai maviri ekuchengetedza mvura uye mazinga anovaka. Kuti udzivirire masimba ane errogenic, zvinogona kudiwa kushandisa anti-estrogen yakafanana neNolvadex®. Mumwe angashandise kushandisa aromatase inhibitor seArimidex® (anastrozole), iyo inogadzirisa zvakanakisisa yeestrogen control. Aromatase inhibitors, zvisinei, inogona kuva yakadhura zvakanyanya pakuenzanisa neyero estrogen yekurapa mishonga, uye inogonawo kuva nemigumisiro yakaipa paropa lipids.
Icho chinyorwa chokuti mibolerone inoratidzawo basa rakasimba seprogesin mumuviri. Matambudziko anokonzerwa ne progesterone akafanana neaya eesrogen, kusanganisira zvisina kunaka maitiro ekudzivirira testosterone nekugadzirwa kwehuwandu hwemafuta. Progestins inowedzerawo kukuvadza kwekuvhiringidza kweedrogen pamusoro pemamera ekukura. Ikoko kunoratidzika kuva nesimba rakasimba pakati pehomoni mbiri idzi pano, zvokuti gynecomastia inogona kuitika kunyange nekubatsirwa kweprogestins pasina maitiro eesrogen akawanda kwazvo aripo. Kushandiswa kwe-anti-estrogen, iyo inhibits the estrogenic chikamu chechirwere ichi, inowanzokwanira kuderedza gynecomastia inokonzerwa nemabolerone.
Iro androgenic migumisiro yembabolerone inogona kusanganisira mazinya, kuveura bvudzi uye kupererwa kwevhudzi muvarume vanofanirwa kusvika kumurume. The androgenic side effects of mibolerone inogonawo kusanganisira zviratidzo zvevakadzi mukati; Ichokwadi, virilization pane imwe nhanho inenge yakanyatsosimbiswa.
Imwe yenzira dzakaipisisa yekuputsa moyo wako maitiro ndekutora Mibolearone. Paunenge uchivatora, vanozoita kuti cholesterol yako iwedzere, kunyanya yako cholesterol yakaipa, inopinda mudenga. Zvichaitawo kuti zvirwere zvepfungwa zviripo zvakanyanya kuipa. Chengeta zvose izvi mupfungwa paunoshandisa Mibolearone. Iwe unofanirwa kunge uri kudya kudya kunotsigira utano hwakanaka hwemwoyo, izvo zvinoreva zvakawanda zve omega mafuta acids, mashoma eshupfu nyore uye mafuta mashoma akazara. Kunze kwemaitiro akanaka ekudya, chiito chekurovedza muviri chinosimudzira cardio chinokoshawo. Kana iwe uri mumwe munhu akakodzera tsanangudzo yakangotaurwa, iwe unofanirwa kunge wakanaka neMibolearone.
Zvisinei, kana iwe uri munhu ane urombo hwepfungwa yemwoyo, iyi ndeimwe mishonga yaunofanira kungoedza kuedza kutora. Chero kana zvichiitika, iwe unogonawo kutora antioxidant supplement kuti uite kaviri-tarisa kuti zvese zvezvigadziro zvako zvakavharwa kana uchishandisa.
Mibolerone inonzi c17-alpha alkylated compound. Iko kushandura kunodzivirira chirwere ichi kubva pakuchenesa nechiropa, zvichibvumira zvakanyanya kuwandisa kwechirongwa chechirwere muropa rinotevera kushandiswa kwemuromo. C17-alpha alkylated anabolic / androgenic steroid inogona kuva hepatotoxic. Kugara kwenguva yakareba kana kukwirira kunogona kukonzera kuora kwechiropa. Muzviitiko zvisingaoneki kutyisa kwehupenyu kunogona kukura. Zvinokurudzirwa kushanyira chiremba periodically panguva imwe neimwe kurongedza kuongorora chiropa chinoshanda uye hutano hwakakwana. Kuwana kwe-c17-alpha alkylated steroid inowanzosara kumasvondo e6-8, mukuedza kudzivisa kukura kwechiropa. Dambudziko rakakomba reropa harina kupa iyo nguva inoshandiswa nevanhu vakawanda kushandisa oral anabolic / androgenic steroids, kunyange zvazvo isingagoni kuiswa kunze neseroti iyi, kunyanya nepamusoro-dhe uye / kana kwenguva refu yekutonga. Cherechedza kuti US inorondedzera ruzivo rwemabolerone inotaura nezvekudzidza kwevanhu mumwe chete kunoitwa pamabolerone, uye kuti chidzidzo chacho chakapedzwa kare nekuda kwepamusoro hepatotoxicity.
Kushandiswa kwechiropa detoxification kunowedzera zvakadai seLiver Stabil, Liv-52, kana Essentiale Forte inorayirirwa apo inotora chero hepatotoxic anabolic / androgenic steroids.
Mibolerone madhara-Testosterone Inhibition:
Mibolerone inonyanyisa kubvisa testosterone chaiyo yekugadzirwa.
-Kuneta kurara kana kushaya hope
-Vanyoro vemaziso vanotanga kushandura yellow
-Hermed blood pressure
-Kutenda kwekuenda kumwedzi kune vakadzi
-Kuchengetedza kwemazuva uye kukwidziridzwa kwevakadzi muvakadzi
-Kuchengetedza inzwi muvakadzi
-Inowedzera njodzi yeyo myocardial infarction
-I zvinowanzokonzera triglycerides
-Inonyanya kuderedza kuguma kwekuzorora
9. Mibolerone anoongorora
Tarisa madonhwe, makemikari zita mibolerone, CAS Nha. 3704-9-4, yakatanga kuberekwa semubatsiri mukuchengetedza imbwa dzevakadzi kubva pakupisa. Zvechokwadi inofungidzirwa uye androgen, zvisinei, mibolerone inonyanya kufanana neprogesti iyo ndiyo inogadzirisa migumisiro yayo mumbwa dzechikadzi.Iizvoizvo, mibolerone inenge kaviri kubatana kweprogesterone receptor seprogesterone pachayo. Iyi mishonga yakanga ine mukurumbira sekuti steroid yakasimba inobatsira pakuwana vanhu uye nekuwedzera kuwedzera utsinye. Izvi zvinodhaka ndeye-ne-19 inokonzerwa nebolasterone uye sezvo nandrolone inowedzera uye yakawedzera progestational kupfuura testosterone, ndizvo zvakaita mbabolerone kuenzaniswa nebolasterone. Kuwedzerwa kweboka re methyl paC-7 hakungowedzera AR uye PR asiwo kunowedzera kutyisa kwema molecule. Mibolerone inobva kune nortestosterone (nandrolone); zvisinei, haisi mishonga ine diabidronandrolone metabolite isinganyanyi kukosha pamusana pekudzivirira kweiyo 7-alpha methyl boka.
Mibolerone inofungidzirwa steroid ine simba zvikuru inobereka zvido zvinoda kuitika munguva shoma shomanana. Zvisinei, izvi ndezvokuti kana steroid inotarisirwa muzviyero zvakaringana zvemaji, mukati memiganhu, uye nenzira yakakodzera.
Izvi ndechokuti mabolerone dosages yakagadzirirwa mushure mezviitiko zvinoshanda uye kutsvakurudza kwakawanda kwesayenzi. Zvose mune zvose, chigadzirwa chacho ndechechokwadi uye chinobudirira, asi chinofanira kushandiswa nekuchenjerera kukuru.
10. Tenga Mibolerone online
AASraw inzvimbo yakakurumbira inopa shanduro dzakawanda dze steroid yakasvibira paIndaneti, inopa mibolerone inotengeswa paIndaneti, nekuti Upjohn akamira kubudisa kuongorora madonhwe makore mazhinji akapfuura, saka hausi mabhodhoro mazhinji (kana pane zvachose) aripo yegadzirwa rekutanga rakagadzirwa na Upjohn. Kunyange zvazvo mhosho Chengeta Dhepasi zvakaoma kuuya, pane zvakawanda zvepasi pasi pevhu zvembolerone ine zvigadzirwa zvinogona kurongerwa kubva mumusika wepasi pevhu. Mutengo unogona kusiyana, asi, pamagumo, mg pam mg iyi steroid yakakosha zvikuru kana ichifananidzwa nevamwe vakaita saDaa Durabolin naDi Dianabol. Saka mazhinji mabhuku epasi pedenga anotenga mbolerone yakashambadzirwa inotengeswa paIndaneti kuita zvigadzirwa zvakagadzirwa.
Tags: Tenga Mibolerone powder, Mibolerone powder
Tykerb (231277-92-2) -Muurayi wezamu MAGL inhibitor JJKK-048 vashambadziri online